ဂန္ထဝင်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်စာရွက် + ဒိန်ခဲအေးခဲစေသည် - ကိတ်မုန့်
ဒါ အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်စာရွက် အမှန်တကယ်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်သည်အရသာရှိသင့်သည်တကား! အတူတကွ မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲ လူတွေကဘာကြောင့်တကယ့်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ကိုချစ်ကြသလဲဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ ဤသည်ကိတ်မုန့်, ​​buttery ပျော့ပျောင်းသည်နှင့်အမှန်တကယ်ကကတ္တီပါဖော်ပြချက်အထိအသက်ရှင်သည်။ ဤသည်ကိတ်မုန့်နှင့်အတူတကယ်ကောင်းကောင်းအားလုံးအတွက် Ermine နှင်းခဲ သို့မဟုတ်ငါ့ လွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲ ။
ဒီစာရွက်ကိုအရင်ကငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့အကြိမ်ကနေအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအဆသန်းတစ်ရာပိုကောင်းတယ်။ ဒါကသင်အမြဲလေ့လာသင်ယူနှင့်တိုးတက်အောင်နေကြသည်, မုန့်ဖုတ်နှင့်အတူအရာပါပဲ။ ငါစူပါဂန္ကြီးနှင့်အစားအစာအရောင် (yuck) နှင့်အတူရုံ vanilla ကိတ်မုန့်မဟုတ်ခဲ့အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်စာရွက်ချင်တယ်။ ငါအကြိုက်ဆုံးကိတ်မုန့်အရသာအနီရောင်ကတ္တီပါခဲ့သူတစ် ဦး client ကိုအပေါ်ဤစာရွက်ထွက်စမ်းသပ်ပြီးသူမကသူမအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ငါကအနိုင်ရရှိသည်ထင်။
အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်သည်အနီရောင်အစားအသောက်အရောင်ပါသည့်ချောကလက်ကိတ်မုန့်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာမူရင်းအနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်သည်၎င်း၏နာမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နို့နှင့်ပုံးရည်သည်ကိုကိုးအမှုန့်၌အနီရောင်သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်ကိတ်မုန့်ကိုအရောင်အနီရောင်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထောပတ်နှင့်ရှလကာရည်သည်ဂျုံမှုန့်တွင်ပါရှိသော gluten ကိုပိုမိုနူးညံ့သောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသည်အနီရောင်ကတ္တီပါကိုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအနီရောင်အစားအစာအရောင်ကိုဒီနေ့မြင်တွေ့နေရသောအရောင်များကိုပိုမိုပြင်းထန်စေရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ထားသောအနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်၏အရသာသည်လူတို့၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောအတွေ့အကြုံနည်းသောမုန့်ဖုတ်သမားများသည် vanilla ကိတ်မုန့်၌အနီရောင်အစားအစာအရောင်များကိုပေါင်းထည့်ရုံပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အနီရောင်အစားအစာအရောင်များသည်အမှန်တကယ်အလွန်ခါးသောအရသာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သင်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်အလွန်အကျွံအရသာကိုအရသာလွန်ကဲစွာစားဖူးပါက၎င်းသည်အမှန်ပင်ဆိုးရွားသည့်အရသာဖြစ်သည်။
အစစ်အမှန်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ကိုထောပတ်နို့၊ ရှလကာရည်နှင့်ကိုကိုးအမှုန့်အနည်းငယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ချောကလက်အရိပ်အမြွက်ပါသောအလွန်ညိုသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။ ဒါကတော်တော်ထူးခြားတဲ့အရသာပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်သင်အချို့သောမုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲထဲသို့ထည့်သောအခါသို့မဟုတ် ermine နှင်းခဲ (အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်အတွက်ဂန္ထဝင်နှင်းခဲ) ပြီးနောက်၎င်းသည် ပို၍ ပင်အနံ့အရသာရှိစေသည်။ ထိုအနံ့အရသာသည်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်၏အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်သည်အချက်နှစ်ချက်ကြောင့်လူကြိုက်များသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ လူအချို့သည်စိမ်းလန်းသောကတ္တီပါကိတ်မုန့်စစ်မှန်သောစာရွက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီးဖြစ်သည်။ ငါတကယ်အရသာဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြပါဘူး။ အခြားအချက်တစ်ချက်ကအလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ကိတ်မုန့်အရသာပါပဲ။ အကယ်၍ သင်၌အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ကောင်းကောင်းမတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းကိတ်မုန့်ကိုအနီရောင်ကိတ်မုန့်နှင့်သာပေါင်းသင်းပါကကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အပြန်အလှန်ငြင်းခုံမှုများရှိပါကကောင်းသောအရာတစ်ခုခုသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်အမြဲတမ်းလူကြိုက်များလာသည်။ အနုပညာမှာပြောတာတစ်ခုကကောင်းရင်လူတွေကချစ်ချင်ကြလိမ့်မယ်မုန်းလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းကအကြောင်း 'ok' ခံစားရလျှင်, ဒါက meh ပါပဲ။ ကိတ်မုန့်နှင့်အတူတူပင်လူတို့သည်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်သို့မဟုတ်မုန်းသည်ဟုထင်ရသည်။
အိုကေဒါငါတကယ်တ ဦး တည်းပန်းကန်နည်းလမ်းရဲ့လုပ်ငါတကယ်ကိတ်မုန့်စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါပြောင်းပြန် creaming နည်းလမ်းကဲ့သို့ပိုမိုတိကျသောရောစပ်နည်းလမ်းကိုကြိုက်တတ်တဲ့။ ဤအနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်သည်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
မုန့်ညက်၊ သကြား၊ ကိုကိုးအမှုန့်၊
သီးခြားပန်းကန်လုံးထဲတွင်ဥ၊ ဟင်းရွက်ဆီ၊ ထောပတ်၊ အရည်ပျော်ထောပတ်၊ ရှလကာရည်၊
Battery ကို 8″ ပတ်ပတ်လည်မုန့်ပြားပြားထဲသို့ဖုတ်ပါ။
ငါသည်ငါ့ကိတ်မုန့်ကိုဒိန်ခဲအေးခဲစေသောနှင်းခဲနှင့်ဖြည့်လိုသည်။ ထို့နောက်အပြင်ဘက်တွင်လှပသောကိတ်မုန့်ပုံသဏ္makeာန်ပြုလုပ်ရန် (အမိုးခုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းမှ) ကိတ်မုန့်အချို့ကိုသုံးသည်။ အနည်းငယ်အဖြူရောင်ချောကလက်နှင့်စန်းနှင့်အတူအပါအ! ဒါကတ ဦး တည်းတော်တော်လေးအနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ပါပဲ။
ငါ၏အကိတ်မုန့်ကိုဖုတ်ပြီးနောက်ငါသူတို့ကိုအအေးခံစေပြီးနောက်, သူတို့ကိုပြားချပ်ချပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်၏ကိတ်မုန့်အမိုးခုံးကိုချုံ့။ သင်၏ပထမဆုံးအလွှာကိုကိတ်မုန့်ပြား (သို့) ပြားချပ်ချပ်ပြားပေါ်တွင်ချထားပါ။
သင်၏မုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲနေသောကြီးမားသောကြက်ဥကိုထည့်ပြီး offset spatula ကိုသုံးပြီးသင်၏ကိတ်မုန့်အလွှာသို့ဖြန့်ပါ။ ငါသည်ငါ့နှင်းခဲအကြောင်းကို 1/4 'အောင်ပါစေ။ ထို့နောက်အခြားကိတ်မုန့်တစ်ထပ်ကိုထိပ်တွင်ထားပါ။ နောက်ဆုံးအလွှာနှင့်အတူထပ်လုပ်ပါ။
သင်၏နှင်းခဲများကိုကိတ်မုန့်တစ်လျှောက်တွင်အလွှာပါးလေးတစ်ခုတွင်ဖြန့်ပါ။ ဒါကသူတို့က Frost အင်္ကျီဟုခေါ်သည်နှင့်အစအနများအားလုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပေါင်မုန့်ကိုခဲပြီးမိနစ် ၂၀ ကြာအေးအောင်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲ၌အခြား buttercream အလွှာတစ်ခုကိုထပ်ထည့်ပြီးခုံတန်းရှည်တစ်ချောင်းဖြင့်ခြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လှဲချခြင်းဖြင့်ချောမွေ့စေသည်။ တစ် ဦး က turntable ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအများကြီးကူညီပေးသည်။
ပြင်ပအစွန်းတစ်လျှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အရုပ်သေးသေးလေးများဖြင့်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ အားလုံးပြီးပြီ!
ဤအနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
ဒီစာရွက်ကိုကိတ်မုန့်အဖြစ်လုပ်လို့ရမလား။ - ဟုတ်တယ်၊ မင်ကိတ်မုန့်အတွက်ဒီစာရွက်ကိုသင်သေချာသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုငါအကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသူတို့တကယ်ကောင်းကောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ 400ºFတွင် ၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ၊ ထို့နောက် ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိလျှော့ချပါ။ ၁၀-၁၅ မိနစ်သို့မဟုတ်အလယ်ဗဟိုတွင်မယားစကားမပြောမှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ၂/၃ ထက်ပိုသောမက္ကဆီကန်ကိုမဖြည့်ပါနှင့်သို့မဟုတ်သူတို့သည်ပြည့်လျှံသွားကာပြိုလဲသွားလိမ့်မည်။
ငါနို့ထွက်မကျရင်ဘာကိုသုံးရမလဲ။ - သင်သည်ချဉ်သောမုန့်ပမာဏ (အလေးချိန်အားဖြင့်) ကိုတူတူသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပုံမှန်နို့ရည်ထဲ၌ 1 Tbsp ရှလကာရည်ကိုထည့်နိုင်သည်။ အိမ်တွင်းထောပတ်လုပ်ရန်အခွံမွှေးမှီတိုင်အောင်မိနစ်အနည်းငယ်မျှထိုင်ပါ။
အနီရောင်အစားအသောက်အရောင်ကိုငါမချန်ထားနိုင်သလား။ ဟုတ်ကဲ့။ သင်နိုင်ပေမယ့်ကိတ်မုန့်ကအတွင်းပိုင်းမှာသိပ်နီနေမှာမဟုတ်ဘူး။
အံ့သြဖွယ်အစစ်အမှန်အနီရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်စာရွက်။ ဖလားတစ်လုံး၊ အဆိုပါကိတ်မုန့်အလွန်ပေါ့ပါးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်အလွန်စိုစွတ်သည်။ မုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲသောသို့မဟုတ် buttermream မုန့်ညက်နှင့်အတူကောင်းသောသွား! ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ446kcal
▢၁၄ အောင်စ (397 ဆ) AP ဂျုံမှုန့်
▢၁၄ အောင်စ (397 ဆ) သကြားဓာတ်
▢နှစ် ဇွန်း (နှစ် Tbsp) ကိုကိုးအမှုန့်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁ Tsp) ဆားငန်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁ Tsp) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢နှစ် ကြီးမားသည် (နှစ်) ဥ အခန်းအပူချိန်
▢၄ အောင်စ (၁၁၄ ဆ) ဟင်းရွက်ဆီ
▢၈ အောင်စ (၂၂၇ ဆ) နို့ အခန်းအပူချိန်
▢၁ ဇွန်း (၁ Tbsp) ရှလကာရည်ဖြူ
▢၆ အောင်စ (၁၇၀ ဆ) unsalted ထောပတ် အရည်ပျော်သော်လည်းမပူ
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁ Tsp) vanilla
▢၁ ဇွန်း (၁ Tbsp) စူပါအနီရောင်အစားအစာအရောင် ငါ americolor စူပါအနီရောင်ကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင့်အရသာမရှိသောကြောင့်
Cream ဒိန်ခဲ Frosting ပါဝင်ပစ္စည်းများ
▢၁၂ အောင်စ (340 ဆ) ဒိန်ခဲမုန့် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၈ အောင်စ (၂၂၇ ဆ) unsalted ထောပတ် ပျော့ပျောင်းသည်
▢1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (1/2 Tsp) လိမ္မော်ရောင်ထုတ်ယူ
▢1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (1/4 Tsp) ဆားငန်
▢၂၆ အောင်စ (737 ဆ) သကြားမှုန့် ဆန်ခါချခဲ့သည်
မီးဖိုအား 350F သို့အပူပေးပါ။ ကိတ်မုန့် (၈) လုံး (၆) ခု (၆) ခု (ကိတ်မုန့်သုံးလုံး) သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့် (သို့) ပိုကောင်းသောဒယ်အိုးမှုန်ရေမွှားများဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ။ သင့်ရဲ့အအေးပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးအခန်းအပူချိန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အသေးစိတ်အတွက်စာရွက်၏အောက်ခြေရှိမှတ်စုများကိုကြည့်ပါ။
သင်၏အခန်းအပူချိန်ကြက်ဥ၊ ဆီ၊ ထောပတ်၊ ရှလကာ၊ အရည်ပျော်မှုထောပတ်၊
မုန့်ညက်၊ သကြား၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ ကိုကိုးအမှုန့်နှင့်ဆားတို့ကိုသင်၏ရပ်တည်မှုရောစပ်စက်၏အိုးထဲသို့ပေါင်းထည့်ပါ
Battery ကိုကိတ်မုန့်များအဖြစ် ခွဲ၍ ၃၅-၄၀ မိနစ်ခန့်မျှသွားသို့မဟုတ် toothpick သန့်ရှင်းစွာမထွက်မချင်းဖုတ်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန့်ဒိန်ခဲ buttercream နှင့်အတူperfectlyုံစုံ။
Cream ဒိန်ခဲ Frosting ညွှန်ကြားချက်များ
သင်၏အအေးခံသည့်ကိတ်မုန့်ကိုအလိုအလျောက်အေးခဲအောင်ထားပါ။ အခန်းအပူချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ပါ။ Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းကိုကိတ်မုန့်မကျမှီနာရီအနည်းငယ် (၂-၃) တိုင်အောင်အေးခဲစေသင့်သည်။
သင်သတိမပြုမိရန်အရေးကြီးသောအရာများ 1. သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုယူလာပါ အခန်းအပူချိန် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပြတ်တောက်မသွားအောင်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုအနည်းငယ် (ဥများ၊ ထောပတ်နို့၊ ထောပတ်စသည်) ပင်။ 2. မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ 4. နှင်းခဲများမဖြည့်ခင်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးအောင်လုပ်ပါ။ နှင်းခဲနှင့်အအေးခံထားသောကိတ်မုန့်ကိုသင်နှစ်သက်လျှင်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိတ်မုန့် stacking အဘို့လည်းကြီးလှ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်မပို့မီကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အမြဲထားလေ့ရှိသည်။
မုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲနှင့်အတူ blueberry သံပုရာကိတ်မုန့်